FSX / FSX: SE olana ara-teknika
fanontaniana FSX / FSX: SE olana ara-teknika
2 taona 2 volana lasa izay #75 by Gh0stRider203
Moa FSX / FSX: SE maha-fanaintainana? Misy zavatra tsy mandeha tsara fotsiny? Io no toerana ny manontany hiala amin'ny olana ara-teknika! Na bibikely, fiaramanidina, cockpit virtoaly, na inona na inona ...
2 taona 2 volana lasa izay #101 by varaciro
izay karazana ny olana no niatrika?
2 taona 2 volana lasa izay #113 by Rolando
rehefa manomboka ny fsx, i maintsy Klick maina ny hafatra: fahadisoana ny initialisation ny Concorde Britanika, ary fahadisoana ny 2 sceneries. ahoana no hamahana ireo olana 3?
2 taona 2 volana lasa izay #115 by Gh0stRider203
Rolando nanoratra hoe: rehefa manomboka ny fsx, i maintsy Klick maina ny hafatra: fahadisoana ny initialisation ny Concorde Britanika, ary fahadisoana ny 2 sceneries. ahoana no hamahana ireo olana 3?
Tsy azoko antoka inona no fahadisoana tena hafatra ny fahazoana, fa saika toa manana dika mitovy maromaro ny fiaramanidina nametraka. Nanala 1 amin'izy ireo no hamaha izany.
2 taona 2 volana lasa izay #118 by Rolando
Misaotra ny valin-teninao. Tsy azoko antoka, ny fomba hanaovana izany. Izaho no afatratra ny Conncords indray, fa ny installer no tsara hanala ny nametraka dika teo anoloan'ny fametrahana vaovao. Ny olana dia toy izany koa. Na ny hevitrao deinstall Tsy maintsy tanteraka ny Concords ary avy eo nampakatra azy?
2 taona 2 volana lasa izay #119 by Gh0stRider203
Rolando nanoratra hoe: Misaotra ny valin-teninao. Tsy azoko antoka, ny fomba hanaovana izany. Izaho no afatratra ny Conncords indray, fa ny installer no tsara hanala ny nametraka dika teo anoloan'ny fametrahana vaovao. Ny olana dia toy izany koa. Na ny hevitrao deinstall Tsy maintsy tanteraka ny Concords ary avy eo nampakatra azy?
Esory ny aho Concorde (s) tanteraka, nampiditra FSX jereo raha manome anao ny hafatra, ary raha tsy izany, dia hametraka azy io, ka jereo izay mitranga.
2 taona 2 volana lasa izay #120 by Rolando
Misaotra noho ny hevitra. Nataoko izao manaraka izao:
- esory ny concordes tanteraka (fa tsy hita ao amin'ny fsx), fa ny hafatra dia toy izany koa!
- Izaho koa dia niezaka ny hamerina ilay solosaina, fa hafatra ihany
- Izaho alaina ny concordes vaovao sy nametraka azy ireo, mitovy hafatra
Hafahafa, no? I fa aza mahalala afaka hamafa ny hafatra diso.
2 taona 2 volana lasa izay #122 by Gh0stRider203
Efa teny an-Aircraft fampirimana mba ho azo antoka intsony ry zareo?
(Raha ny raharaha, izany B: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight simulator X \_ SimObjects \_ fiaramanidina)
Afa-tsy izay tsy mahalala izay tokony hilaza aminao.
azonao mamoaka Pikantsary 'ny fahadisoana? izay mety hanampy Ahy somary.
btw .. mankasitraka ny faharetana ao izany. Fantatro ianao mety ho sorena fotsiny (raha tsy mihoatra noho izany) noho ny fitiavany Ahy. Tsy misy zavatra Halako mihoatra noho ny zavatra tsy miasa.
2 taona 2 volana lasa izay #133 by Rolando
ny hafatra ao Alemana (Izaho no Soisa), dia tena midika hoe: fahadisoana ny initialising ny Concorde anglisy. fa tsy misy olana lehibe, satria ny fiaramanidina manidina tsara. Izaho ihany no manana tsindry bebe kokoa rehefa manomboka ny fsx ...
izany no izy, misaotra betsaka noho ny fanampiana. raha mety manana vahaolana tatỳ aoriana, antsoy aho azafady.
Rolando, Soisa iray mipetraka any Thailand ...
2 taona 2 volana lasa izay #134 by Gh0stRider203
Iza no Concorde? no nahazo iray avy eto ianao?
Ary ny azy na dia nanana alemà, izay tsy ho olana LOL nahazo namana izay miteny alemà mahay tsara ^ _ ^